မိသားစုတစ်စု ဘာ့ကြောင့်ဆင်းရဲရသလဲ…? ~ လူဗိုလ်ဟူသည် ...
Author: lu bo | 8:42 PM | No မှတ်ချက် | သိမှတ်ဖွယ်ရာ ဗဟုသုတရွာ
ဒီမိသားစုဆိုတဲ့ လှပတဲ့အဓိပ္ပါယ်လေးက အရမ်းကို လေးနက်မှုရှိသလို ပျော်ရွှင်အေးချမ်းဖွယ် မေတ္တာကမ္ဘာလေး
အိမ်ထောင်စု တစ်စု မိသားစု တစ်စု ဘာ့ကြောင့်ဆင်းဆင်းရဲရဲ ဒုက္ခတွေကို ရင်ဝယ်ပိုက်နေရသလဲဆိုတာလေးပါ..
အိမ်တစ်အိမ်မှာ အိမ်ထောင်ဦးစီး လုပ်တဲ့သူ တစ်နည်းအားဖြင့် “အဖေ” ကို အဓိကထားစေချင်တာပါအိမ်ထောင်ဦးစီးညံ့ဖျင်း
ရင်လည်း ဒီအိမ်ဟာဆင်းရဲမှာပဲ၊ အိမ်ထောင်ဦးစီအနေနဲ့ မိန်းမယူ၊ ကလေးမွေးယုံလောက်နဲ့တော့ အိမ်ထောင်ဦးစီး မခေါ်ထိုက်သေးပါဘူး။
ဒီအချက်ကတော့ အရေးကြီးတယ်အိမ်တစ်အိမ်မှာ အိမ်တွင်းသူခိုးရှိနေရင်လည်း ဒီအိမ်ဟာ ဆင်းရဲမှာ ပဲ အိမ်ထောင်ဆိုတာ လင်နဲ့မယား နှစ်ဦးတည်ဆောက်ထားတာပါ ။
ဆင်းရဲပြီး...ဆိုလိုတာက ကိုယ့်ဘက်ကိုပဲကြည့်တတ်တဲ့ သူကိုဆိုလိုတာပါ။ ကိုယ့်အိမ်မှာဖြင့်စားမလောက်သေးဘူး၊ ကိုယ့်အမျိုးဆီကို ခိုးခိုးပေးနေတာ မိသားစုရှေ့ရေးကို သိပ်မတွေးဘူး။ ထင်တိုင်းကျဲနေတာမျိုး ထမင်းမငတ်ရုံတမယ်ပဲ ရပ်တည်နေသ၍တော့အဲ့ဒီအိမ်ဟာဆင်းရဲမှာပဲ….
နောက်တစ်နည်းက အရက်သောက်တတ်တဲ့ ယောက်ျားကလည်း ခိုးမှာပဲ၊ ချဲတွေ နှလုံးတွေ ထိုးတတ်တဲ့ မိန်းမကလည်း ခိုးမှာ အဲဒါဆိုသေချာတယ် ဒီအိမ်ထောင်စုဟာ ဆင်းရဲနေမှာပဲ…။
အိမ်တစ်အိမ်မှာ မိသားစုဆိုတာ ဖြစ်ပေါ်လာမှာပဲ… အဲ့မိသားစုတွေမှာပဲ ပြဿနာတစ်ခုက အကြီးနဲ့အငယ်
အိမ်တစ်အိမ်ဟာ ဘယ်တော့မှ သာယာမှုမရှိဘူး၊ နေ့တိုင်းလိုလို စကားများတတ်တယ်၊ မသိရင်သူစိမ်းတွေလိုပဲ။ သူ့ကိုလည်းအဖတ်မလုပ် င့ါကိုလည်းမလေးစား ဖြစ်နေရင်တော့ အဲ့ဒီ့ အိမ်ထောင်စုဟာလဲပြိုပြီးဆင်းရဲတွင်းထဲ
လူဆိုတာ လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းထဲမှာ နေတတ်မှ လူနဲ့တူတာပါ။ အဲ့လိုမှ မဟုတ်ရင်တော့ လူဖြစ်တယ်ဆိုရုံပဲ သုံးလို့ရပါတယ်။ လူလို့ မခေါ်ထိုက်လောက်ပါဘူး။ အဓိကပြောချင်တာက ကိုယ်နေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ အဆင်ပြေအောင် နေစေချင်တာပါ… အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲ သူနဲ့ငါ့အကြောင်းပြော ငါနဲ့တွေ့ရင် သူ့အကြောင်းပြော လောကကြီးကို အကောင်းမမြင်းတတ်ဘူး ဆန့်ကျင်ဘက်
အတွေးတွေ ရှိနေသ၍ တော့ ဘယ်တော့မှ အဆင်ပြေနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး… ။
ဘယ်တော့မှ အဆင်ပြေပြေနဲ့ ခရီးဆက်နိုင်နေမှာမဟုတ်တဲ့ အတွက် ဒီအိမ်ဟာလည်း ဆင်းရဲနေမှာပဲ။
ကျနော်ပြောတဲ့ ဒီအချက်တွေ တစ်ချက်ချက်နဲ့ ငြိနေတယ်ဆိုရင် ဒီမိသားစုရဲ့ အနာဂတ်ဟာ လှပနေမှာမဟုတ်နိုင်တဲ့ အတွက် ကျနော့် ရဲ့ စာဖတ်ပရိတ်သတ်တွေလည်း ဒီအချက်လေးတွေကို ရှောင်ကျဉ် နိုင်ကြမယ်ဆိုရင် ၀မ်းသာပါတယ်။ ဒီအချက်တွေနဲ့ လွတ်မြောက်နိုင်မယ်ဆိုရင် အေးချမ်းလှတဲ့ မိသားစုဘ၀လေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အေးချမ်းပြီးပျော်ရွှင်လှတဲ့ မိသားစုဘ၀လေးကို လူသားတိုင်း
ဒီမိသားစုဆိုတဲ့ လှပတဲ့အဓိပ်ပါယျလေးက အရမျးကို လေးနကျမှုရှိသလို ပြျောရှငျအေးခမျြးဖှယျ မတ်ေတာကမ်ဘာလေး
အိမျထောငျစု တဈစု မိသားစု တဈစု ဘာ့ကွောငျ့ဆငျးဆငျးရဲရဲ ဒုက်ခတှကေို ရငျဝယျပိုကျနရေသလဲဆိုတာလေးပါ..
အိမျတဈအိမျမှာ အိမျထောငျဦးစီး လုပျတဲ့သူ တဈနညျးအားဖွငျ့ “အဖေ” ကို အဓိကထားစခေငျြတာပါအိမျထောငျဦးစီးညံ့ဖငျြး
ရငျလညျး ဒီအိမျဟာဆငျးရဲမှာပဲ၊ အိမျထောငျဦးစီအနနေဲ့ မိနျးမယူ၊ ကလေးမှေးယုံလောကျနဲ့တော့ အိမျထောငျဦးစီး မချေါထိုကျသေးပါဘူး။
ဒီအခကျြကတော့ အရေးကွီးတယျအိမျတဈအိမျမှာ အိမျတှငျးသူခိုးရှိနရေငျလညျး ဒီအိမျဟာ ဆငျးရဲမှာ ပဲ အိမျထောငျဆိုတာ လငျနဲ့မယား နှဈဦးတညျဆောကျထားတာပါ ။
ဆငျးရဲပွီး...ဆိုလိုတာက ကိုယျ့ဘကျကိုပဲကွညျ့တတျတဲ့ သူကိုဆိုလိုတာပါ။ ကိုယျ့အိမျမှာဖွငျ့စားမလောကျသေးဘူး၊ ကိုယျ့အမြိုးဆီကို ခိုးခိုးပေးနတော မိသားစုရှေ့ရေးကို သိပျမတှေးဘူး။ ထငျတိုငျးကြဲနတောမြိုး ထမငျးမငတျရုံတမယျပဲ ရပျတညျနသေ၍တော့အဲ့ဒီအိမျဟာဆငျးရဲမှာပဲ….
နောကျတဈနညျးက အရကျသောကျတတျတဲ့ ယောကျြားကလညျး ခိုးမှာပဲ၊ ခြဲတှေ နှလုံးတှေ ထိုးတတျတဲ့ မိနျးမကလညျး ခိုးမှာ အဲဒါဆိုသခြောတယျ ဒီအိမျထောငျစုဟာ ဆငျးရဲနမှောပဲ…။
အိမျတဈအိမျမှာ မိသားစုဆိုတာ ဖွဈပျေါလာမှာပဲ… အဲ့မိသားစုတှမှောပဲ ပွဿနာတဈခုက အကွီးနဲ့အငယျ
အိမျတဈအိမျဟာ ဘယျတော့မှ သာယာမှုမရှိဘူး၊ နတေို့ငျးလိုလို စကားမြားတတျတယျ၊ မသိရငျသူစိမျးတှလေိုပဲ။ သူ့ကိုလညျးအဖတျမလုပျ င့ါကိုလညျးမလေးစား ဖွဈနရေငျတော့ အဲ့ဒီ့ အိမျထောငျစုဟာလဲပွိုပွီးဆငျးရဲတှငျးထဲ
လူဆိုတာ လူ့အသိုငျးအ၀ိုငျးထဲမှာ နတေတျမှ လူနဲ့တူတာပါ။ အဲ့လိုမှ မဟုတျရငျတော့ လူဖွဈတယျဆိုရုံပဲ သုံးလို့ရပါတယျ။ လူလို့ မချေါထိုကျလောကျပါဘူး။ အဓိကပွောခငျြတာက ကိုယျနတေဲ့ ပတျဝနျးကငျြနဲ့ အဆငျပွအေောငျ နစေခေငျြတာပါ… အဲ့လိုမှမဟုတျပဲ သူနဲ့ငါ့အကွောငျးပွော ငါနဲ့တှရေ့ငျ သူ့အကွောငျးပွော လောကကွီးကို အကောငျးမမွငျးတတျဘူး ဆနျ့ကငျြဘကျ
အတှေးတှေ ရှိနသေ၍ တော့ ဘယျတော့မှ အဆငျပွနေိုငျမှာ မဟုတျပါဘူး… ။
ဘယျတော့မှ အဆငျပွပွေနေဲ့ ခရီးဆကျနိုငျနမှောမဟုတျတဲ့ အတှကျ ဒီအိမျဟာလညျး ဆငျးရဲနမှောပဲ။
ကနြျောပွောတဲ့ ဒီအခကျြတှေ တဈခကျြခကျြနဲ့ ငွိနတေယျဆိုရငျ ဒီမိသားစုရဲ့ အနာဂတျဟာ လှပနမှောမဟုတျနိုငျတဲ့ အတှကျ ကနြေျာ့ ရဲ့ စာဖတျပရိတျသတျတှလေညျး ဒီအခကျြလေးတှကေို ရှောငျကဉျြ နိုငျကွမယျဆိုရငျ ၀မျးသာပါတယျ။ ဒီအခကျြတှနေဲ့ လှတျမွောကျနိုငျမယျဆိုရငျ အေးခမျြးလှတဲ့ မိသားစုဘ၀လေးကို ပိုငျဆိုငျနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ အေးခမျြးပွီးပြျောရှငျလှတဲ့ မိသားစုဘ၀လေးကို လူသားတိုငျး